China Mamiriro ekunze anodzivirira E1 akaenzana emishenjere ekugadzira mabhodhi Kugadzira uye Fekitori | Goridhe Bamboo
Mamiriro ekunze anodzivirira E1 standard bamboo decking board
REBO yekunze inorema yemishenjere pasi MF321 inoratidzirwa ine hombe wave pamusoro penzvimbo uye yakati sandara kana yakashongedzwa kumashure. Iyo yakagadzirirwa nerurimi uye groove musoro system, saka mapuranga maviri anogona kuve akabatanidzwa pamwechete nyore. Iwo marefu mativi akaenzana akakwenenzverwa, kuti aiswe nyore nyore neasina simbi clip pamwe nemajoists.
REBO yekunze inorema yemishenjere yakadzika MF321 inowanzo kurapwa nekupisa kwekupisa kupisa uye kwakanyanya kumanikidza. Naizvozvo, huwandu hwacho hwakakwirira zvakanyanya kupfuura hwapasi pemishenjere nehuriri hwehuni. Iyo mbishi zvinhu zvinogona kumutsidzirwa moso bamboo, inova inochengetedza zvakatipoteredza. Isu tiri nyanzvi yekugadzira mundima iyi, inovhara yakawanda yemisika yeEurope neAsia uye kuwana mukurumbira wakanaka kubva kune vatengi.
REBO yekunze inorema yemishenjere uriri inoitwa zvinoenderana neyakajairwa ENV 12038 Kugadzikana Kirasi 1 (yakasimba kwazvo) uye Shandisa Kirasi 4. Iyo inopesana nemoto, isina mvura, inorwisa-kutsvedza, inoshamwaridzika munzvimbo. Iyo formaldehyde emission inosangana neE1 chiyero cheEuropean. Mazuva ano, REBO yekunze yemishenjere flooring inoshandiswa zvakanyanya mubindu, paki, hotera, balcony, patio, chikoro, nezvimwe, uye iri kuramba ichiwedzera kufarirwa mumisika dzepasi rese.
Pashure: Zvakatipoteredza zvine hushamwari zvakachengetedza bango rekunze uriri
Zvadaro: Kupisa kumanikidza kwakanaka kwemhando yepamusoro inorema bango pasi